Uzikhotha amanxeba uNdongeni | News24
Uzikhotha amanxeba uNdongeni
U-Richard Ndongeni uxakene nobomi ujonga umonakalo owenzekileyo ehokini yakhe.uMFANEKISO: UNANTHI OBOSE
Lushiyeke lubambe ongezantsi usapho lakwa Ndongeni, kwindawo yamatyotyombe iBarcelona eGugulethu, emva kokuchithwa kwetyotyombe lalo.
Kutyholwa ngelithi eli tyotyombe lichithwe ligqiza eliphuma kwicandelo elilwa nokuthatyathwa kwemihlaba ngetshova ngaphantsi kweSixeko saseKapa.
Kungoku nje olu sapho lugunyazisa iSixeko ukuba sihlawule imali oluthe lwayisebenzisa ekuthengeni izixhobo zokwakha.
Umnikazi wetyotyombe U-Richard Ndongeni utyhole amagosa eSixeko ngokophula umthetho ngethuba echitha kwakhe. “Ndisenzile isicelo kwii oofisi zikamasipala eFezeka eGugulethu sokulungisa ihoki yam,” utshilo. “Ndiye ndayifumana neleta endivumelayo ukuba ndingayilungisa.”
Uhambise wathi ihoki yakhe ibinamagumbi amane iyonke, waze wachitha igumbi elinye ngethemba lokuphinda awalungise kamva amanye. Uthe walichitha eli tyotyombe ngomhla wama 23, waza kamva waqalisa ngomsebenzi.
“Ngoku ndibone kufika abantu bakwamasipala bezokuyichitha. Besele ndigqibile ukuyakha, xa kanye ndigqibezela ukusamenta phantsi,” utshilo uNdongeni.
Utyhole ngelithi akhange babuze, bafike sele bengxamile baliwisa phantsi ityotyombe lakhe. Uthe inzame zakhe zokunqanda zife namthanyane. “Ndiyikhuphile ileta ndababonisa, kodwa abazange bandihoye bayijonga nje baqhubeka bayichitha. Ngoku andinandawo yakuhlala,” utshilo uNdongeni.
U-Ndongeni, nobebonakala enesingqala, uthe ulahlekelwe yimali eninzi kakukhulu ngethuba ethenga izixhobo zokwakha.
“Amazinki ewodwa ebengama 67, iipali ezintandathu zentsimbi, iingxowa ezili 18 zesamente, iingxowa ezili 10 zamatye kunye namaplanga angapha kwama 20. Ndiyichithile imali engaphezulu kwama R50 000,” ucacise watsho.
Uhambise wathi kunzima nokuphangela ngoba ihoki yakhe ayikhuselekanga. “Ndiphangela ebusuku ndisebenza njengonogada. Kodwa ukususela ngala mhla yadilizwa ngawo andizange ndiphinde ndikwazi ukuphangele ngoba ndoluse usapho lwam,” woleke ngelitshoyo.
Uthe uyile ukuya kuxelela uceba wengingqi, uBongani Ngcombo, ngomhla wesiganeko, kodwa akazange abonakale nango tshengele. “Uceba uhlala kwalapha engingqini andigqibi nemizuzu elishumi xa ndisiya kuye. Kodwa oko sehla esi sehlo akazange afike azokubona nanjengoko wayethembisile ukuba uzakuza,” uye wakhalaza ngelitshoyo uNdongeni.
Eziphendulela uNgcombolo uthe unolwazi ngokudilizwa kwale hoki.
“Ndisivile eso siganeko sokuchithwa kwehoki eBarcelona, kodwa ndilinde amalungu alwa nokuthathwa komhlaba ngokungekho semthethweni ukuba ndiye nawo phaya. La mntu (Ndongeni) uyakhela ama Somalia la hoki ukuba athengise. “Xa ngaba injongo ibikukulungisa ihoki yakhe, kutheni lento engayichithanga yonke ngexesha elinye. Kungoba eza zixhobo zokwakha azisebenzise ukwakha la hoki bezingenokuyigqiba la hoki yakhe yonke?” ubuzile uNgcombolo.
Olilungu lesigqeba kwikomiti kasodolophu kwiSixeko saseKapa kwicandelo elijongene nokuhlaliswa kwabantu uMalusi Booi ungqinile ukuba uNdongeni ebeyinikiwe imvume yokuba alungise ihoki yakhe, kodwa ufunyenwe esokha enye ihoki ecaleni kwalena ebefanele ukuba uyichithile.
Wongeze ngelithi kuye kwafumaniseka ukuba wakhe ihoki kufutshane nepali yombane nenokwenza ingozi.
“Ukulungiselela uphuhlisa kula nginqi iSixeko sizama kangangoko ukuba sigcine umyinge weehoki ezikhoyo ngoku kwaye abanakuzivumela ezakhiwe bumini. Ukanti nomnini walahoki uye walunyukiswa ngomlomo kwaye wacetyiswa,” uthethe watsho uBooi.
Wongeza ngelithi besi Sixeko bayasebenzisana neenkokheli zokuhlala ukuzama ukunqanda ukwanda kweehoki.
U-Booi ugxininisile ukuba besi Sixeko abazukumnika mbuyekezo uNdongeni ngokonakalelwa kwakhe. “Abahlali abanodelela umgaqo nkqubo weSixeko obekiweyo ze balindele ukuba bazakubuyekezwa xa ngaba bethe bonakalelwa,” uvalelise ngelitshoyo uBooi.